आदर्श कोतवालमा प्रमुख सदाम तथा उप-प्रमुख्मा प्रतीक्षा गुप्ता लाई सहानुभूतिको मत दिने – CIN Nepal Online Radio Network
आदर्श कोतवालमा प्रमुख सदाम तथा उप-प्रमुख्मा प्रतीक्षा गुप्ता लाई सहानुभूतिको मत दिने
By CINN सम्वादाता	 Last updated May 2, 2022
(Last Updated On: May 2, 2022)
मधेश प्रदेशको बारा जिल्लाको क्षेत्र न. १ मा सर्वसधारणहरुले यसपाली जसरि भए पनि लोसपा नेपाल लाई नै जिताउने अभियानमा लागेका छन्। आदर्श कोतवालमा प्रमुख सदाम अंसारी तथा उप-प्रमुख्मा प्रतीक्षा गुप्ता तथा सम्पुर्ण टिमलाई सहानुभूतिको मत दिने सर्वसाधारणले वताउने गरेका छन् । यस आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाका प्रमुखका उम्मेदवार सदाम तथा उप-प्रमुखकी उम्मेदवार गुप्ताले घर-घरमा सर्वसाधारण सित जितको सुनिश्चितताका लागि आशीर्वाद लिन जादा सबैले जीतको आशीर्वाद दिने गरेका छन् । सर्व साधारणले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सबै जना उमेदवार लाई मतदान गरि जीताउने धारणा बोकी स्वस्फुर्त रुपमा सर्वस धारनाहरुले भोट माङ्ग्न थालेका छन्।
लोसपा नेपालका तर्फ़ बाट पालिका प्रमुख सदाम तथा उप-प्रमुखकी उम्मेदवार गुप्ता लाई सहानुभूतिका लागि पिठ्युँ ठोकी आशीर्वाद दिने गरेका छन् । घरदैलो कार्यक्रममा लोसपाका सबै उम्मेदवारहरुले गाउघरको सबै समस्याहरु बारेमा बुझ्दै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सहित बाचा गर्ने गरेका छन् । यी दुवै उम्मेदवारले जनताको हरेक दु:ख शुखमा संगै रहने गरेको कुरा लाई आत्म सात गर्दै एक जुट भएर अगाडी बढेका छन्। आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाका वासीले साइकलमा मात्र मतदान गरि आफ्नो समाज आफै बनाउ भने मूल नारा बनाई लोसपा मैय भएका छन्।
सर्वसधारनहरु गाउघरमा घरदैलो गर्दै लोसपा नेपालले नै हाम्रो समाजमा परिवर्तन ल्याउने विश्वासका साथ यस पालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न अगाडी बढेका छन्। सामाजिक कुरीति, तानाशाह, निरंकुस्ता, अनियमितता तथा सर्व प्रथम शिक्षा, स्वास्थ तथा कृषिप्रधान पालिका व्यवहारमा लागू गराउने लगायतका विषयमा सजग हुदै यसपाली साइकाल छापमा मतदान गरि आफ्नो समाज लाई सहि दिशामा डोर्याउन लागेको स्थानियहरुले बताएका छन्।
हाम्रो देश तथा मधेशको कल्याण गर्न लोसपा नेपाल लाई नै निर्वाचित गर्न अनिवार्य रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रिय सदस्य डा.कमरुल्लाह अंसारीले बताए। हाम्रो मधेशको मांग तथा अधुरा अधिकारहरु अहिले पनि ओझेलमा रहेकोले लोसपा नेपाल निर्वाचित भए मात्र ती सबै समस्या समाधान हुने लोसपाका केन्द्रिय सदस्य डा. कमरुल्लाह अंसारिले बताए। विगतको आन्दोलनको कुरा लाई ध्यानाकर्षण गराई साइकल छापमा मात्र मतदान गरि सबै पदका उम्मेदवारहरु लाई निर्वाचित गर्न आग्रह गर्ने गरेका छन् ।
वीरगञ्ज हेल्थ केयरमा भएको आगलागीको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सांसद यादवद्वारा स्थलगत निरीक्षण
सिम्रौनगढ़ वासीले लोसपा लाई सहानुभूतिको मत, दान गरि निर्वाचित गर्ने
This Week: 11034
This Month: 52508